HALYEEY Man Utd ka Tirsanaa oo Sheegay Sababta uu Ronaldo ugu Biiray Juventus inuu qeyb ka yahay Lionel Messi, Adigoon Aqrin Xaqiiqda Ma Ogaan kartid!!!
Monday, February 18th, 2019 - 18:57:00
Wednesday July 11, 2018 - 10:42:57 in Wararka by Muuse Cabdi
CRISTIANO RONALDO ayaa ka tegay kooxda Real Madrid wuxuuna ku wareegay Naadiga Juventus sababtana waxaa qeyb ka ahaa Lionel Messi.
Tani waa Aragtida Laacibkii ay Ronaldo ay isku Kooxda ku ahaayeen Manchester United ee Ryan Giggs wuxuuna ku macneeyay Sabab aad la yaabeyso waxa uu xiddiggaani ugu biiray Turin.
Ronaldo ayaa 4-sano oo Qandaraas ah u saxiixay kooxda Juventus keddib markii Real ay Aqbashay £105milyan oo looga Iibsanayo 33-jirkan.
Laacibkan oo ku guuleystay 5 mar Abaalmarinta Ballon d’Or ayaa hadda ka mid noqonaya Old Lady, iyadoo si la mid ah Messi uu sidoo kale hantay 5 Abaalmarintan ah.
Tartanka ayaana sii socon doona, Giggs ayaa rumeysan in Ronaldo uu ula jeedka Juventus uu ugu biiray ay tahay in uu Tartanka Messi uu kula jiro uu tuso inuu Naadiyo Badan kula Tartami karo, halka Barcelona uun uu ku dhammeysanayo waqtigiisa Laacibka Argentina.
"Wuxuu ku darsanayaa Diiwaanka Shaqadiisa, - Real Madrid, Manchester United iyo Juventus waa CV wanaagsan,” Giggs ayaa sheegay isaga oo ka hadlayay ITV Ciyaar Koobka Dunida ah oo ka socotay. "balse wuxuu la kulmi karaa Caqabado sidaas ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
In Messi uu u ciyaaray kaliya Barcelona oo Waxqabadkiisa iyaduba horumarisa, haddana Ronaldo uu kooxo badan oo waaweyn u ciyaaray kuna noqday laacib Bandhig fiican ayaa noqon doonta mid uu codeyn kale ku helo laacibka Portugal u dhashay.